Boqolaal Muslimiin ah oo lagu xiray Bangladesh | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Bangladesh :-(SONNA) Booliska Bangladesh ayaa xiray boqolaal Islaamiyiin ah usbuucii la soo dhaafay, ka dib markii lagu eedeeyay in ay horkacayeen banaanbaxyo dhiig badan ku daatay oo looga soo horjeeday booqashadii Ra’iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi, dalkaas booqasho ku tagay dhamaadkii bishii Maarso ee la soo dhaafay.
Wakaaladda wararka France Presse, soo xigatay afhayeenka u hadlay Booliska Bangladesh, ayaa yiri “Toddobaadkan, waxaan gacanta lagu soo dhigay hoggaamiyihii toddobaad ee dhaqdhaqaaqa, Ilaaliyaasha Islaamka, Meynuun Al-Xaq, isagoo ku eedeeyay abaabulka dibad baxyo rabshad watay oo ay geysteen Xarakadan.
Waxaa la filayaa in dacwad lagu soo oogi doono maxaabiistan loo xirxiray rabshadahii dhacay intii lagu jiray mudaharaadyadii looga soo horjeeday booqashadii Ra’iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo banaanbaxyadii dhacay sanadkii 2013, oo ay ku dhinteen dad gaaraya 50 qof.
Dhinaca kale, afhayeen u hadlay ilaalada Islaamka, oo lagu magacaabo Zakariye Nucmaan Al-Faydi, ayaa sheegay in Booliisk Bangaladheesh, ay xireen 23 hogaamiye, isaga oo intaa ku daray in eedeymaha lagu soo oogay ay yahiin been abuur.
Waxaa xusid mudan in dhaqdhaqaaqa “Ilaalada Islaamka” ay abaabuleen mudaaharaad sanadkii 2013, iyaga oo dalbanaayay in la soo saaro sharci ka dhan ah cayda diinta Islaamka, kaas oo ay ku dhinteen tobanaan qof.
Previous articleShir looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Dhuusamareeb+”Sawirro”
Next articleMadaxweynaha Puntland oo Cafis u fidiyay Maxaabiis
Ku-simaha Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada oo kulan la qaatay Guddiga Madaxa...
Maamulka gobolka Banaadir oo kulan duco ah u sameeyay Shuhadada dhacdadii 2...